Izindaba - Okufanele Ukwazi Ngamazinyo Enja Yakho
Kunezindlala zezithukuthuku ezinyaweni zenja yakho.
Izinja zikhiqiza izithukuthuku ezingxenyeni zemizimba yazo ezingamboziwe ngoboya, njengekhala namaphakethe ezinyawo zazo.Ungqimba lwangaphakathi lwesikhumba esidladleni senja luqukethe izindlala zomjuluko - ukupholisa inja eshisayo phansi. Futhi njengabantu, lapho inja inovalo noma icindezelekile, ama-paw pads abo angaba manzi.
Ama-Paw Pads zipinki uma ziyimidlwane
Izidladla zezinja zivame ukubomvana lapho zizalwa, Lapho zikhula, isikhumba sangaphandle samaphakethe ezinyawo zawo siyaqina, izidladla zizoshintsha zibe mnyama. Imvamisa, izidladla zezinja ziyingxube yamabala amnyama futhi abomnyama lapho enezinyanga eziyisithupha ubudala. Lokhu kusho ukuthi ama-paw pads abo aya ngokuqina, ngakho-ke bakwazi ukuhamba ngokukhululeka futhi bagijime noma kuphi.
Ukusika Izipikili zakhe
Uma izinzipho zenja zichofoza lapho zihamba noma zibanjwa kalula, usuke edinga ukuzisika. Izipikili akufanele zishelele phansi, ungathenga i-nail clipper yenja yakho. Iningi lezilwane linikela ngale nsizakalo uma umnikazi engazi ukuthi angayenza kanjani ngokwakhe. Uboya obuphakathi kwamaphakethe wezidladla buye bube matting uma bungagundiwe njalo. Ungakwazi ukuhlanganisa izinwele futhi usike ngakho-ke zinamaphakethe. Bheka amatshe amancane noma amanye ama-debris ngenkathi usika.
Licking noma ukuhlafunaing izidladla zabo
Uma inja yakho ikhotha izidladla zayo, kungenzeka ukuthi ihlushwa isithukuthezi noma inkinga yokuziphatha njengokukhathazeka. ngakho-ke ukhotha iphedi yakhe ukuze anciphise imizwa yakhe. Ukwehlisa isithukuthezi, zama ukuhambisa inja yakho ngezindlela eziningi zokuhamba, ukugijima, noma isikhathi sokudlala nawe nezinye izinja ukusebenzisa amandla amaningi engqondo nawomzimba. Mnikeze amathoyizi wezintambo aphephile ukuze asuse ukugxila kwakhe kuzidladla zakhe.
Amaphayiphu aqhephukile noma omile
Uma isikhumba senja yakho soma, inkinga ejwayelekile esimweni sezulu esibandayo lapho ukufudumeza okuphakathi kwehlisa umswakama ekhaya, amapayipi ayo angahle aqhephuke futhi aqweqwe. Kunemikhiqizo eminingi ephephile, ethengiswayo etholakalayo.